ဂန္ထဝင်နှင့်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်၏ကွာခြားချက် ၁၀ ခု Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 15, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သူ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်ရောဘတ်ဝဲလ်လာ (Thomas Wellen) သည် Thomas Schenke ၏စာအုပ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်၏အဓိကကွာခြားချက် ၁၀ ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် Recht ဤသည်၌ infographic.
စာရင်းသည်ပြည့်စုံပြီးအမြန်နှုန်း၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ တည်မြဲမှု၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ တရားဝင်မှု၊ ယနေ့ခေတ်ကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်ကွဲပြားသောအရာများအားအသိအမှတ်မပြုခြင်းနှင့်ကောင်းကျိုးများကိုနားမလည်သေးသောရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာများစွာရှိနေသည်။
Tags: ဂန္စျေးကွက်infographicrobert ရေတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှန်တယ်လူမှုမီဒီယာ und rechtThomas schenkeကျွနုပ်toushenne.de
16:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 58
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ infographic ကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အသုံးဝင်တာတွေ့လို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့၊ နည်းနည်းပိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံလိုက်တာပါ။ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် 😉 ဗားရှင်း2ကို ငါ့ဘလော့မှာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် (မင်းဆောင်းပါးမှာ သုံးထားတဲ့ လင့်ခ်အတိုင်းပါပဲ)။
16:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 41
အံ့ဩစရာ။ အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ - Robert ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
16:2013 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 28
6:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 04
Classic နှင့် Social Media Marketing အကြား ကွာခြားချက် 10 ခု- ဤဆောင်းပါးသည် တကယ်ကောင်းသည်။ Classic နှင့် Social Media Marketing အကြား ခြားနားချက်များကို တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနေပြီး ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ် အဖြေရရှိပါသည်။ ကျေးဇူးပါ။
ဇန်နဝါရီ 11, 2016 မှာ 8: 34 AM
အလွန်အသုံးဝင်သော infographic… (အကိုးအကား ofc) ကျွန်ုပ်၏ဟောပြောပွဲအတွက် ၎င်းကိုအသုံးပြုပါသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
နိုဝင်ဘာလ 28 ရက် 2016 ခုနှစ် ညနေ 10:11 နာရီ
ဂန္ထဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှိုင်းယှဉ်။ အင်တာနက်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘတ်ဂျက်ပိုသက်သာပြီး တူညီသောရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။